Waa Kee Musharaxa Uu Tilmaamay Jeesow ee Aan Madaxweyne Noqon Karin | Xaqiiqonews
Waa Kee Musharaxa Uu Tilmaamay Jeesow ee Aan Madaxweyne Noqon Karin
Faallo uu Jeesow ka dhiibtay xaaladda kala guurka ee dalka ayuu ku sheegay in ay jirto qodob ay tahay qof walbo oo musharrax ah in uu ka digtoonaado.
Xildhibaan Jeesow ayaa arinta taageera u muujinta Axmed Madoobe ka dhigay “qad gaduudan”, waxa uuna musharrax walboo oo dalkan rajo ka leh kula taliyey in ay iska ilaaliyaan arin sumcadooda wax u dhimi karta.
Jeesow waxa uu sheegay in uu taageersan yahay musharax walbo oo doonaya in uu dalkan xil ka qabto isaga oo yiri “Musharaxiinta waa dad sharaf badan, madaxweynayaalkii dalka soo maray yaa ka mid ah, dad ku cusub siyaasadda ayaa ka mid ah”.
Inkastoo Jeesow uusan sheegin halka uu codkiisa la rabo, balse waxa uu farta ku fiiqay dadka uu kula taliyey in aysan “lacagta iska qasaarinin”, hadii aysan ogoleyn in ciidamada Soomaaliya ay ka howlgalaan xeryahoodii, islamarkaana ay camiraan saldhigyadooda loogu tala galay-sida uu hadalka u dhigay.
Xildhibaan Jeesow ayaa karbaashay markale Axmed madoobe & jawaasiista kale ee Kenya u adeega
Posted by Ali Juba on Friday, 4 December 2020